Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fiara Premium Sport Compact Vaovao
Acura androany dia nanome izao tontolo izao ny fijeriny voalohany ny Integra vaovao andrasan'ny besinimaro, izay manambara ny fiverenan'ny nameplate malaza amin'ny filaharana Acura. Vita tamin'ny loko Indy Yellow Pearl nindramina avy amin'ny NSX, ny Integra Prototype dia famantarana mafy ny famolavolana ivelany ny Acura Integra 2023 vaovao rehetra, izay mitentina manodidina ny $ 30,000 rehefa tonga any amin'ny mpivarotra Acura amin'ny herintaona.
- Ny Integra Prototype dia manambara ny fiverenan'ny takelaka anarana malaza amin'ny filaharana Acura
- 2023 Integra dia ho kompam-panatanjahantena avo lenta miaraka amin'ny tafo toy ny coupe ary endrika liftback misy varavarana dimy.
- Ny Integra turbocharged voalohany amin'ny orinasa dia maka hery avy amin'ny 1.5-litatra avo lenta miaraka amin'ny VTEC®
- Natao ho an'ny mpankafy, ny fifindran'ny manual 6-hafainganam-pandeha hatolotra
- Integra tsy manam-paharoa sy azo tratrarina, manomboka manodidina ny $30,000 eo ho eo rehefa tonga amin'ny taona manaraka
Acura androany dia nanome izao tontolo izao ny fijeriny voalohany ny Integra vaovao andrasan'ny besinimaro, izay manambara ny fiverenan'ny nameplate malaza amin'ny filaharana Acura. Vita tamin'ny loko Indy Yellow Pearl nindramina tamin'ny NSX, ny Integra Prototype dia famantarana mafy ny famolavolana ivelany ny Acura Integra 2023 vaovao rehetra, izay hitentina manodidina ny $30,000 rehefa tonga any amin'ny mpivarotra Acura amin'ny herintaona.
Aingam-panahy avy Integras taloha, anisan'izany ny tany am-boalohany izay nanampy tamin'ny famoahana ny marika Acura tamin'ny 1986, ny Integra 2023 dia ho lasa maodely fampisehoana vavahady vaovao ao amin'ny tsipika Acura, fanatanjahan-tena avo lenta miaraka amin'ny endrika dimy-varavarana manaitra sy fanahy mahafinaritra. Ny Integra voalohany misy turbocharged amin'ny orinasa dia hampientanentana taranaka vaovao amin'ny mpamily mafana fo miaraka amin'ny fifindran'ny manual hafainganam-pandeha enina azo ampiasaina, ny tsy fitoviana amin'ny slip voafetra ary ny motera 1.5-litatra avo lenta, miaraka amin'ny VTEC® mazava ho azy.
"Ny Integra dia iray amin'ireo modely malaza indrindra amin'ny tantaran'i Acura," hoy i Jon Ikeda, filoha lefitra ary Acura Brand Officer. “Ity Integra vaovao ity, dia hanohy hanatitra amin'ny maha-tokana azy irina nefa azo tratrarina toeran'ny tsena, miaraka amin'ny fampisehoana ara-pihetseham-po sy ny fomba, miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny fitaovana tadiavin'ny mpividy ankehitriny. "
Noforonina tany Japon, ny endrika ivelany sahisahy vaovao an'ny Integra dia manasongadina tafo mitongilana sy vavahadin-tsoavaly mitongilana, manome azy ny fisian'ny lalana mitovitovy amin'ny coupe. Fandikan-teny maoderina momba ny tsipika Integra, ny maodely taranaka fahadimy dia mampiseho famantarana famantarana toy ny anarana Integra misy embossed eo ambanin'ny jiron'ny mpamily sy ny jiron'ny mpandeha.
Hita voalohany teo amin'ny Type S Concept, ny grille Diamond Pentagon vaovao tsy misy frame an'i Acura dia manome ny anoloana Integra ho toetra misy tanjona sy fanatanjahantena. Ny sonia jiro tokana an'i Acura dia nohavaozina miaraka amin'ny jiro mandeha antoandro "Chicane" LED izay mipetraka eo ambonin'ny jiro LED JewelEye® Integra, izay manome endrika manaitra kokoa.
Ny andohalambon'ny kodiaran'ny hozatra sy ny fascia amboarina mahery vaika miaraka amin'ny famotsorana roa-setroka manasongadina ny lalan'i Integra. Aingam-panahy avy amin'ny maodely Integra teo aloha, ny fanaingoana miavaka ao aoriana dia manasongadina jiro mivelatra, singa tokana miaraka amin'ny sonia maivana "Chicane". Ao ambadiky ny kodiaran'ny Integra Prototype matte-finished 19-inch split-dimy spokes dia brake Brembo ™ avo lenta miaraka amin'ny calipers Indy Yellow miloko miloko, manome hery mampitony sy fijery mahery vaika.
Ny loko Indy Yellow Pearl manaitra an'ny Integra Prototype dia manome voninahitra an'i Phoenix Yellow, natolotra tamin'ny 2000-2001 Integra Type R. Ny lantom-peo mainty Berlina mainty dia nampiharina tamin'ny tafon'ny Integra, spoiler decklid, satroka fitaratra, diffuser aoriana ary grille anoloana. . Ny kisarisary ambany-sill dia mampiseho amim-pahasahiana ny anarana Integra amin'ny sisin'ny fiara.
Ny fanombohana ny 2023 Acura Integra dia hanamarika ny fotoana voalohany hananganana Integra any Amerika, rehefa hanomboka famokarana faobe amin'ny taona manaraka ao amin'ny Marysville Auto Plant any Ohio. Natao haorina amin'ny tsipika famokarana mitovy amin'ny Acura TLX, Integra dia hiaraka amin'ireo modely Acura vaovao rehetra amidy any Etazonia amin'ny fananganana ao Ohio.
Ny antsipiriany bebe kokoa momba ny Acura Integra 2023 dia havoaka akaiky kokoa ny fampidirana ny tsena amin'ny tapany voalohany amin'ny taona manaraka.